Ogaden News Agency (ONA) – Denmark oo Kulan Balaadhan Maanta Lagu Qabtay.
Denmark oo Kulan Balaadhan Maanta Lagu Qabtay.
Madaxda iyo Hawlwadeenka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) ee kahawlgala wadanka Denmark ayaa maanta iskugu yimid shir muhiim ah oo siwanaagsan loosoo agaasimay. Waxaa madasha shirka soobuux dhaafiyay xubno tiro badan oo kamid ah Jaaliyada Somalida Ogadenya. Shirkan oo ahaa mid aad utayaysan ayaa ujeedada oogu wayn ee looqabtay ay ahayd sidii looga wada arinsan lahaa hawlo muhiim ah oo Jaaliyada uqorshaysnaa hirgalintooda iyo kamidho dhalinteeda.
Kulankan ayaa waxaa khudbado iyo warbixino aad uqiimo badan kasoojeediyay madaxda Jabhada JWXO ee fadhigoodu yahay wadanka Denmark. Warbixinadii laga soojeediyay shirka ayaa iskugujiray abaabul iyo wacyigalin. Sidoo kale waxaa warbixin aad uqiimo badan oo meelo badan taabanaysa madasha shirka kasoo jeediyay Mudane Xasan Macalin oo kamid ah madaxda JWXO ee fadhigoodu yahay dalka Denmark. Mudane Xassan ayaa kahadlay xaalada uu Gumaysigu Itoobiya ee gabalkiisu dhacay kusuganyahay iyo heerka uumarayo taasoo ay umuuqato inuusan nidaamka EPRD/TPLF hormuudka utahay siiwaaraynin.
Dhanka kale waxaa siqoto dheer leh looga wada arinsaday waxqabadka iyo horumarinta halganka guud ahaan gaar ahaan kaalinta ay jaaliyada Denmark kuleedahay. Ajendaha Jaaliyada ayaa uqorshaysan martigalinta shir waynaha Ururka Hooyooyin Somalida Ogadenya oo lagu wado in lagu qabto haduu eebuhu yiraahdo dhamaadka sanadkan aan kujiro. Munaasabada shirkan ayaa qiimo gaar ah oogu fadhiya Hogaanka Sare ee JWXO gaar ahaan Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka taasoo kagali doonta hirgalinteedu baal dahabi ah taariikhda Halganka Shacabka Somalida Ogadenya.
Kulankan ayaa kusoo dhamaaday jawi aad uwanaagsan oo isfahan iyo is afgarad kudhamaaday taasoo la,isku balabsaday sidii loohirgalin ineey hawlaha Jaaliyada uqorshaysan sidii loogu talogalay uhirgalaan haduu eebaha awooda leh karaali noqdo.